သွေးတိုးရောဂါ အတွက်လက်တွေ့ပျောက်ခဲ့သူ တစ်ဦး ရဲ့ ဆေးနည်း (ရှယ်ထားပေးပါအုံး …) – Let Pan Daily
ခေတ်တွေ နဲ့ အညီ တိုးတက်လာတဲ့ နောက်မှာတော့ လူတွေဟာ ယခင်ကလောက် အစားအစာအတွက် ပြင်းထန်စွာ ရှာဖွေစရာမလိုတော့ပါဘူး။စားချင်တာ များအတွက် မိမိဆီမှာ ပိုက်ဆံရှိဖို့သာ လိုအပ်ပြီးတော့ စားလိုတာများကို ဆန္ဒရှိသလို စားသောက်လို့ ရနေတဲ့ ခေတ်ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီလို အစားအသောက်ဟာ ရာသီစာ အဖြစ် မဟုတ်တော့ပဲ ၁၂ ရာသီ စားလို့ရသလို ၊ မစားသင့်တဲ့ အစားအစာ များကိုပါ စားသောက်မိလာတဲ့အခါမှာတော့လူတွေရဲက ကျန်းမာရေးချို့တဲ့မှုတွေဟာ နောက်ဆက်တွဲ ပါလာပါတယ်။ ဒီလို ကျန်းမာရေးချို့တဲ့မှုထဲက သွေးတိုးရောဂါဟာ ဆိုရင် သူဌေးရောဂါလို့ ဆိုရမှာဖြစ်သလို ၊ ခနအတွင်းမှာလည်း လူ့အသက်အပေါင်းများစွာကို နှုတ်ယူနိုင်တဲ့ ရောဂါပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သွေတိုးရောဂါ နဲ့ ပတ်သတ်လို့ ဆေးတွေနေည်းမျိုးစုံရှိပေမယ့် အခု နည်းလေးကတော့ မျျဝေသူ ကိုယ်တိုင် ပျောက်ကင်းခဲ့တာလို့ သိရပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဆေးနည်းလေးကို အားလုံး သိအောင် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ သင့် ရှယ်ရာ တစ်ချက်ဖြင့် လူပေါင်းများစွာရဲ့ ဒုက္ခဝေဒနာကို ကယ်တင်ပေးလိုက်ပါ ဒီပုံထဲကလူကြီးကို ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ….သွေးတိုးတာ ၁၆၀ ဆိုရင်မခံနိုင်တော့ဘူး…. လည်ပင်းတွေအစ်ထလာပြီးစုံးဖမ်းသလိုနတ်မမ်းသလိုလိုနဲ့ ဂေါင်းတွေကိုက် မျက်စိတွေမှုန်ဝါးလာပြီး ခြေထောက်တေလက်တေ လေးလံထိုင်းမှိုင်းလာပြီး လေငန်းဖြတ်ဖို့ချည်လုပ်နေတယ်…. အရင် ၂ ခါလဲ လေငန်းဖြတ်ဖို့လုပ်လို ဆေးရုံ ပြေးရသေးတယ်….သူပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ထား…..အခု သွေးမတိုးတော့ဘူး …..
သူပြောတာတော့ ၃ ရက် ဆက်တိုက် မနက်တကြိမ် နေ့လယ်တကြိမ် ညတကြိမ် ၃ ရက် ဆက်သောက်ရင် အနဲဆုံး ၆လ လောက်ကတော့ အေးဆေးပဲတဲ့ စားချင်တာစားလို့ရတယ်ဆိုပဲ….. ကျနော်ကတော့အခုမှသောက်ထာဆိုတော့ သွေးတိုးကျတာပဲသိသေးတယ် ….ဓါတ်ပြောင်းတာဖြစ်မယ်…. ဘဲဥတလုံး သံပုရာသီတလုံးအရည်အကုန်နဲ့ ဖျော်….အမယ်နည်းရှိသဗျ….. သံပုရာသီးကို တချမ်းခွဲ ဖန်ခွက်ထဲအရင်ထည့် အစေ့တွေဆယ်ပစ်လိုက်….ဘဲဥ ကို ခွဲထည့်လိုက် အဲဒါကို နာနာခေါက်ဖျော်လိုက်ဗျာ….
သောက်တော့မယ်ဆိုရင် ရေအဆင်သင့်ယူထား…..အသက်ကို ဝအောင်ရှူပြီအောင့်ထားလိုက် …. ချိုက်ခနဲနေအောင်သောက်ချလိုက် ….အသက်မရှူနဲ့အုံးနော် ….. သောက်ပီး ပလုပ်ကျင်းလိုက် ပီးမှအသက်ရှူ အနဲငယ်လောက်ပဲညှီနံ့ရပါတယ်…ဘဲဥဘာအရသာမှမရှိဘူး နဲနဲချင်တာပဲရှိတယ်…. တနေ့၃ ချိန်ပေါ့နော် ၃ ရက်ဆက်သောက်ထာ သွေးတိုး ပြေးတော့တာပဲဗျို့….. အဲ …သံပုရာသီးပါတဲ့အတွက် ဖျားနေသူများမတည့်သေးပါ …. အဖျားပြတ်တော့ဆက်သောက်ပေါ့ ….အကိုက်အခဲပျော်ဆေးတွေနဲ့တော့ နီးနီးစပ်စပ်မသောက်ထာကောင်းတယ်….. သွေးတိုးသမားတွေသောက်ကြစမ်းပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်…. ဖတ်မိတဲ့သူများ ရှယ်ပေးပါရန် မေတ္တာ ရပ်ခံပါတယ်ခင်ဗျား….။
ေခတ္ေတြ နဲ႔ အညီ တိုးတက္လာတဲ့ ေနာက္မွာေတာ့ လူေတြဟာ ယခင္ကေလာက္ အစားအစာအတြက္ ျပင္းထန္စြာ ရွာေဖြစရာမလိုေတာ့ပါဘူး။စားခ်င္တာ မ်ားအတြက္ မိမိဆီမွာ ပိုက္ဆံရွိဖို႔သာ လိုအပ္ၿပီးေတာ့ စားလိုတာမ်ားကို ဆႏၵရွိသလို စားေသာက္လို႔ ရေနတဲ့ ေခတ္ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒီလို အစားအေသာက္ဟာ ရာသီစာ အျဖစ္ မဟုတ္ေတာ့ပဲ ၁၂ ရာသီ စားလို႔ရသလို ၊ မစားသင့္တဲ့ အစားအစာ မ်ားကိုပါ စားေသာက္မိလာတဲ့အခါမွာေတာ့လူေတြရဲက က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ့မႈေတြဟာ ေနာက္ဆက္တြဲ ပါလာပါတယ္။ ဒီလို က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ့မႈထဲက ေသြးတိုးေရာဂါဟာ ဆိုရင္ သူေဌးေရာဂါလို႔ ဆိုရမွာျဖစ္သလို ၊ ခနအတြင္းမွာလည္း လူ႔အသက္အေပါင္းမ်ားစြာကို ႏႈတ္ယူႏိုင္တဲ့ ေရာဂါပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေသြတိုးေရာဂါ နဲ႔ ပတ္သတ္လို႔ ေဆးေတြေနည္းမ်ိဳးစုံရွိေပမယ့္ အခု နည္းေလးကေတာ့ မ််ေဝသူ ကိုယ္တိုင္ ေပ်ာက္ကင္းခဲ့တာလို႔ သိရပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ေဆးနည္းေလးကို အားလုံး သိေအာင္ မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။ သင့္ ရွယ္ရာ တစ္ခ်က္ျဖင့္ လူေပါင္းမ်ားစြာရဲ႕ ဒုကၡေဝဒနာကို ကယ္တင္ေပးလိုက္ပါ ဒီပုံထဲကလူႀကီးကို ေက်းဇူးတင္တယ္ဗ်ာ….ေသြးတိုးတာ ၁၆၀ ဆိုရင္မခံႏိုင္ေတာ့ဘူး…. လည္ပင္းေတြအစ္ထလာၿပီးစုံးဖမ္းသလိုနတ္မမ္းသလိုလိုနဲ႔ ေဂါင္းေတြကိုက္ မ်က္စိေတြမႈန္ဝါးလာၿပီး ေျခေထာက္ေတလက္ေတ ေလးလံထိုင္းမႈိင္းလာၿပီး ေလငန္းျဖတ္ဖို႔ခ်ည္လုပ္ေနတယ္…. အရင္ ၂ ခါလဲ ေလငန္းျဖတ္ဖို႔လုပ္လို ေဆး႐ုံ ေျပးရေသးတယ္….သူေျပာတဲ့အတိုင္းလုပ္ထား…..အခု ေသြးမတိုးေတာ့ဘူး …..
သူေျပာတာေတာ့ ၃ ရက္ ဆက္တိုက္ မနက္တႀကိမ္ ေန႔လယ္တႀကိမ္ ညတႀကိမ္ ၃ ရက္ ဆက္ေသာက္ရင္ အနဲဆုံး ၆လ ေလာက္ကေတာ့ ေအးေဆးပဲတဲ့ စားခ်င္တာစားလို႔ရတယ္ဆိုပဲ….. က်ေနာ္ကေတာ့အခုမွေသာက္ထာဆိုေတာ့ ေသြးတိုးက်တာပဲသိေသးတယ္ ….ဓါတ္ေျပာင္းတာျဖစ္မယ္…. ဘဲဥတလုံး သံပုရာသီတလုံးအရည္အကုန္နဲ႔ ေဖ်ာ္….အမယ္နည္းရွိသဗ်….. သံပုရာသီးကို တခ်မ္းခြဲ ဖန္ခြက္ထဲအရင္ထည့္ အေစ့ေတြဆယ္ပစ္လိုက္….ဘဲဥ ကို ခြဲထည့္လိုက္ အဲဒါကို နာနာေခါက္ေဖ်ာ္လိုက္ဗ်ာ….
ေသာက္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ေရအဆင္သင့္ယူထား…..အသက္ကို ဝေအာင္ရႉၿပီေအာင့္ထားလိုက္ …. ခ်ိဳက္ခနဲေနေအာင္ေသာက္ခ်လိုက္ ….အသက္မရႉနဲ႔အုံးေနာ္ ….. ေသာက္ပီး ပလုပ္က်င္းလိုက္ ပီးမွအသက္ရႉ အနဲငယ္ေလာက္ပဲညႇီနံ႔ရပါတယ္…ဘဲဥဘာအရသာမွမရွိဘူး နဲနဲခ်င္တာပဲရွိတယ္…. တေန႔၃ ခ်ိန္ေပါ့ေနာ္ ၃ ရက္ဆက္ေသာက္ထာ ေသြးတိုး ေျပးေတာ့တာပဲဗ်ိဳ႕….. အဲ …သံပုရာသီးပါတဲ့အတြက္ ဖ်ားေနသူမ်ားမတည့္ေသးပါ …. အဖ်ားျပတ္ေတာ့ဆက္ေသာက္ေပါ့ ….အကိုက္အခဲေပ်ာ္ေဆးေတြနဲ႔ေတာ့ နီးနီးစပ္စပ္မေသာက္ထာေကာင္းတယ္….. ေသြးတိုးသမားေတြေသာက္ၾကစမ္းပါလို႔တိုက္တြန္းလိုက္ရပါတယ္…. ဖတ္မိတဲ့သူမ်ား ရွယ္ေပးပါရန္ ေမတၱာ ရပ္ခံပါတယ္ခင္ဗ်ား….။
အခက္အခဲေတြ နဲ႔ အရမ္း ႀကဳံေန ရရင္ ဒီဂါထာေလး ႐ြတ္ ၾကည့္ပါ …
(၂) မိနစ်အတွင်း မျက်နှာကို မည်းညစ်ခြင်းကင်းပြီး ကြည်လင် ဝင်းပစေတဲ့ ဆားသံပုယိုသီးခြမ်း
” အိမ္ေတာင္ လူမိုက္ ဘူးမစိုက္ နဲ႔ ” ဆိုတဲ့ စကား ပုံ၏ အဓိပၸါယ္
သိုက်ဆက်၊ သိုက်အကြောင်း သိလိုသူများ အတွက် မျှဝေပေး လိုက်ပါတယ်
အပြင်ထွက်လာလို့ မရရင်လည်း ရတဲ့နည်း နဲ့ အာဏာရှင်ကို ဆန့်ကျင်မယ့်အကြောင်း ပြတ်ပြတ်သားသား ပြောလိုက်တဲ့ ကိုပေါက်
နှစ်ငါးလုံး အရေးတော်ပုံနေ့ မှာ ထူးခြားစွာ လူလောက ထဲ ရောက်လာ တဲ့ ကလေး
မန္တလေးက အာဏာရှင် ဆန့်ကျင်ရေးမှာ ကြွေလွင့်ခဲ့ သူ နှစ်ဦး အတွက် အလှူငွေ တွေထောက် ပံ့ခဲ့ တဲ့ ဒေါင်း
လူထု လှုပ်ရှားမှုကြီးမှာ ပြည်သူတွေ နဲ့ အတူ တစ်သားထဲ လမ်းမပေါ်ထွက်ကာ တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ စိုင်းစိုင်း
အားလုံး မျက်ရည်ကျခဲ့ရတဲ့ ဦးဇင်ဝိုင်း အတွက် မင်းမော်ကွန်းရေးတဲ့ စာလေး